We Fight We Win. -- " More than Media ": ရွှေ ဖလား နဲ့ကြက်သားကိုင်
ရွှေ ဖလား နဲ့ကြက်သားကိုင်
၄၄ နေရာ ၀င်ပြိုင်တာ ၄၃ နေရာမှာ ဒီချုပ်က အနိင်ရရှိခဲ့ပါပြီ။ ကြံ့ဖွတ် တနေရာမှ မနိင်ကြောင်းသိရပါတယ်။ ကြပ်ပြေး မှာလဲ
ဒီချုပ် ပဲနိင်တယ်။ တနေရာကျန်တာ ဒေါ်မြင့်မြင့်
အေး(မိထ္ထီလာ) နိင်တယ်ဆိုတော့ နေရာအကုန်လုံး မှာ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေ အနိင်ရခဲ့ တယ်လို့ ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။
တဲ့ ပြည်သူလူထုကြီးကို ဦးညွတ်ဂုဏ်ပြုကြောင်း
People vote u to get change.If u cant do for country,dont say Do it urself to get change.
သောက်တလွဲကောင်... မိထ္ထီလာမှာလည်း အန်အယ်လ်ဒီနိုင်တဲ့ကွ..။ ပြောလိုက်ရင် သောက်ရမ်း...
1 April 2012 at 21:32